Dhiha Aafrikaatti sababa Iboolaaf jecha ijoollee miliyoona 5tu barnoota irraa badan - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Saayinsii Barnoota Dhiha Aafrikaatti sababa Iboolaaf jecha ijoollee miliyoona 5tu barnoota irraa badan
Giinii, Laaybeeriyaa fi Seeraliyoon keessatti Iboolaan ijoolleen miliyoona 5 ol ta’an mana barumsaatii akka bahan taasisuu isaa gabaafame. Manni barnootaa fi waajjiroonni mootummaa daddarbiinsa dhibee Iboolaatiif sababa ta’u sodaa jedhuun namoonni heddu akka naannoo sanii baqatan beekameera. Erga ummanni irraa baqatee as, manni barnootaa fi wajjirroonni adda addaa iddoo wol’aansa Iboolaa kan yerootti geeddaramaniiru.
Mannin barnootaa kunniin yeroodhaan banamanii ijoolleen gara barnootaatti hindeebi’an taanaan, ijoolleen heddu achumaan barumsa irraa badanii hafan soda jedhutu jira. Biyyoonni sadiin kunniin durumaa kaasee biyyoota barattoonni barumsa sadrkaa 1ffaa xumuran sadarkaa gad’aanaa irratti argamaniidha. Akka ragaalee Baankii Addunyaatti, ijoollee barnoota sadarkaa 1ffaa eegalan keessaa Giinitti 61%, Laaybeeriyatti 65% fi Seraaliyoonitti 72% qofa kan barnoota sadrkaa 1ffaa xumuran. Kan hafan jidduun kutanii biraa deemu jechuudha.
Osoma tatamsa’iinni Iboolaa dhaabateeyyuu manniin barnootaa qulqulleessanii, shakki I fi soda jirus balleessanii barattoota gara barnootaatti deebisuun hojii salphaa ta’uuf hindeemu. Rakkoon jiru danuudha, haalli naannoo san jirus gadheedha. Duumessa sodaa saaqanii funduratti takaarfachuuf, hawaasaa fi mootummoolee naannoo sanii irraa hojii guddatu eegama.
barnoota sad 1ffaa
Previous articleNaannolleen [states] Ameerikaa 17 perezidaant Baarak Obaamaa irratti himannaa dhiheessan
Next articleTaphattoonni 3 Ballon d’Or’ 2014 injifachuu malan beekaman